Kuratidza zvinyorwa neelebheri Textile fekitari
RTK kuruka mhunga Rokytnice nad Jizerou Lysá hora
RTK, spol. s ro muRokytnice nad Jizerou, iri kambani inoenderera netsika refu yekugadzirwa kwemachira muRokytnice nad Jizerou. Nheyo dzekambani inogona kunyorwa kubva muna 1867. Paigadzirwa kazhinji machira emachira, ese akajeka uye jacquard, grey uye grey, kwenguva iyo iyo kambani yaivewo neayo bleach, saka yakagadzirisa machira pachawo fomu yekupedzisira yekutengesa.
Rokytnice nad Jizerou iri kuchamhembe kweBohemia kuchamhembe kweMakomo eGiant. Nhoroondo yazvo yekare inopindirana neindasitiri yemachira, iyo munguva yakapfuura ndiyo yaive sosi huru yemari yekuguta uye kurarama. Parizvino, inonyanya nzvimbo yekutandarira, vashanyi uye nzvimbo yemitambo. Muzhizha ndiyo nzvimbo yakakodzera yekutanga kukwira makomo uye munguva yechando inzvimbo yakakosha yekuburitsa pasi uye kuyambuka-nyika skiing.